USA: Kongareeska Maraykanka oo u codeeyey in xilka laga xayuubiyo Trump - Idman news
232 Xildhibaan oo ay ku jiraan 10 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Trump ee Jamhuuriga ayaa codkooda ku taageeray mooshinkan, halka ay kasoo horjeesteen 197 xildhibaan oo ah taageerayaasha Donald Trump ee xisbiga Jamhuuriga. 5 Xildhibaan ayaa ka aamusay inay codkooda dhiibtaan.
Donald Trump ayaa noqonaya Madaxweynihii ugu horeeyey ee Maraykanka oo labo goor laga keeno mooshin xil ka qaadista.
Hadii Aqalka Sare Ansixiyo danbiga lagu soo oogay Trump ee ah kicinta shacabka iyo abuurista kacdoon ka dhan ah Sharuucda dalka iyo amniga wadankaasi, xukunkaasi oo ka horjoogsan doona Trump inuu markale isu soo taago xilka Madaxweynaha ama xil kale.
Amaanka xarunta Baarlamaanka Maraykanka iyo caasimada Washington DC ayaa si weyn loo adekeeyey iyadoo la keenay ciidamo militari ah si ay gacan usiiyaan booliiska magaaladaasi xili loo diyaar garoobaya caleemo saarka Madaxweynaha cusub Joe Biden oo dhici doonta Arbacada soo socota.
Previous Militariga Itoobiya oo sheegay inay dileen Wasiirkii hore ee Dibadda iyo xubno sare oo kamid ahaa TPLF
Next Aqalka Wakiilada Mareykanka oo u codeeyey xil-ka-qaadista Trump
Barnaamijka Ciyaaraha 07- 03- 2021 – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Barnaamijka Ogaal (07-03-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Cabdi Qaadir Bisle Oo Madaxda JWXO kusoo Booqday Goobtay ka Daganaayeen Magaala…
Dhallinyarada magaalada Beladweyn oo si iskood ah u bilaabay ka wacyigilinta bu…
Barnaamijka Ciyaaraha 07- 03- 2021 – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia March 7, 2021
Cabdi Qaadir Bisle Oo Madaxda JWXO kusoo Booqday Goobtay ka Daganaayeen Magaala… March 7, 2021
Dhallinyarada magaalada Beladweyn oo si iskood ah u bilaabay ka wacyigilinta bu… March 7, 2021
Tababare Jurgen Klopp oo si adag uga hadlay wararka sheegaya in laga ceyrin karo shaqada Kooxda Liverpool – Gool FM March 7, 2021
Barnaamijka Ogaal (07-03-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia March 7, 2021
Total visitors : 20,938